FAQ fandrahoana sakafo induction - Zhongshan Amor Electrical Appliance Co., Ltd.
1.Mahandro mahandro haingana kokoa noho ny mpamono herinaratra sy gazy mahazatra ve ny mpahandro?
Eny, ny fandrahoana fampidirana sakafo dia haingana kokoa noho ny fandrahoana lozisialy sy ny fandrahoana entona mahazatra. Mamela ny fifehezana eo noho eo ny angovo fandrahoan-tsakafo mitovy amin'ny mpandoro entona. Ny fomba fandrahoana sakafo hafa dia mampiasa lelafo na singa manafana hafanana mena fa ny fanafanana fampidirana dia mampanondrana vilany fotsiny.
2.Ny fandrahoan-tsakafo fampidirana ve dia hihinana angovo avo?
Tsia, ny fandrahoana fampidirana indostrialy dia mamindra angovo elektrika amin'ny alàlan'ny fampidirana avy amin'ny coil of wire rehefa mandeha ao aminy ny herinaratra. Ny ankehitriny dia mamorona sahan'andriamby miova ary mamokatra hafanana. Mafana ny vilany ary manafana ny ao anatiny amin'ny alàlan'ny fitarihana hafanana. Ny velarana fandrahoan-tsakafo dia vita amin'ny akora vita amin'ny seramika vita amin'ny vera izay tsy dia mahavita mitondra hafanana, koa hafanana kely fotsiny no very ao ambanin'ny vilany izay nahitana fandaniam-poana kely raha oharina amin'ny fandrahoana amin'ny lelafo misokatra sy ny lozinina elektrika mahazatra. Ny fiantraikan'ny fampidirana dia tsy manafana ny rivotra manodidina ny sambo, ka miteraka fahombiazana bebe kokoa amin'ny angovo.
3. Misy ve ny loza ara-pahasalamana amin'ny taratra induction?
Cooktops fampidirana mamokatra taratra haavo ambany dia ambany, mitovy amin'ny hafanan'ny radio mikraoba. Ity karazana taratra ity dia mihena tsy misy na inona na inona amin'ny halaviran'ny santimetatra vitsivitsy ka hatramin'ny iray metatra miala ny loharano. Mandritra ny fampiasana ara-dalàna dia tsy ho akaiky ny vondrona fampidirana fampidirana hitrandrahana taratra ianao.
4.Mila teknika manokana ve ny fandrahoana induction?
Ny induction cooker dia loharanon'ny hafanana fotsiny, noho izany, ny fandrahoan-tsakafo amin'ny induction induction dia tsy misy fahasamihafana amin'ny endrika hafanana. Na izany aza, haingana kokoa ny fanafanana miaraka amin'ny vilany fandrahoana.
5.Tsy ny vera ambonin'ny vata fandrahoana? Vaky ve izany?
Ny tampon'ny lakozia dia vita amin'ny vera vita amin'ny seramika, izay matanjaka be ary mahazaka hafanana avo be sy fiovan'ny hafanana tampoka. Ny vera vita amin'ny seramika dia henjana tokoa, fa raha mandatsaka kojakoja mavesatra ianao dia mety vaky. Amin'ny fampiasana isan'andro anefa dia tsy azo inoana ny mamaky.
6. Azo antoka ve ny mampiasa vilia fandrahoana?
Eny, ny fandrahoana fampidirana dia azo antoka kokoa ampiasaina raha tsy amin'ny fahandro mahazatra satria tsy misy afo misokatra sy heater elektrika. Ny bisikileta mahandro dia azo apetraka amin'ny faharetan'ny fahandro sy ny maripana takiana, mandeha ho azy izy io aorian'ny fahavitan'ny tsingerin'ny fandrahoana sakafo mba hisorohana ny sakafo tsy masaka loatra & mety hanimba ny fahandro.
ny maodely rehetra toy ny manome fiasan-tsakafo ho an'ny mahandro sakafo mora sy azo antoka. Amin'ny fandidiana ara-dalàna dia mijanona ho mangatsiatsiaka hatrany ny velaran'ny fandrahoan-tanana mba hikasika tsy misy maratra aorian'ny fanesorana ny vilany fandrahoana.
7.Mba mila lakozia manokana handrahoana sakafo fampidirana ve aho?
Eny, ny lakozia dia mety mitondra marika izay mamaritra azy ho mifanaraka amin'ny vata fandrahoana induction. Ny vilany vy tsy misy fangarony dia hiasa eo amin'ny sehatry ny fandrahoana induction raha toa ka ambaratongam-by vy vy ny fototry ny lapoaly. Raha miraikitra tsara amin'ny faladiany ny andriamby dia hiasa amin'ny sehatry ny fandrahoana induction izy io.